कुख्यात अ’पराधीको श’वको छाला निकालेर जुत्ता बनाएर लगाएपछि…… – SUDUR MEDIA
April 22, 2021 AdminLeaveaComment on कुख्यात अ’पराधीको श’वको छाला निकालेर जुत्ता बनाएर लगाएपछि……
विश्वका केहि यस्ता रोचक तथ्यहरु छन् जुन सुन्दा निकै अचम्म लाग्दा र अनौठो लाग्छ । हामी तपाईंलाई यस्तो वास्तविकता बारे जानकारी दिँदै छौं जसमा एक चर्चित अ पराधीको छाला प्रयोग गरेर जुत्ता बनाइएको छ । उनी अ पराधीलाई आफ्नो सुगाजस्तो नाकका कारण चिनिन्थ्यो । उनको छालाले बनाएको जुत्ता र खोपडी संग्रहालयमा राखिएको छ ।
अमेरिकामा १९ औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा जर्ज प्यारोट नामक डाँकुको निकै ड’र थियो । सुगाको जस्तो नाक भएकाले उनको नाम प्यारोट राखिएको थियो । उनलाई बिग नोज जर्ज पनि भनिन्थ्यो । जर्ज लु टेरा र डाँ कु थिए । उनको समयमा सबै कारोबार क्यासमा नै हुने गर्दथ्यो । जर्ज र उनका साथी घोडामा यात्रा गरिरहेका मानिसहरुलाई लु ट्थे ।
सन् १८७८ मा उनीहरुले ठूलै माछा मा र्ने सोच बनाए र यूनियन प्यासिफिक ट्रेनलाई लु ट्ने योजना बनाए । रेलमा कर्मचारीको सबै तलब राखिएको थियो ।जर्जले आफ्ना साथीसँग मिलेर व्योमिंग क्षेत्रमा नदी नजिकै रेलको ट्र्याकको पेच खोलिदिए र रेलको प्रतिक्षा गर्न थाले । रेल ट्र्याकबाट निस्कने बित्तिकै उनीहरुले सामान लुटेर फ’रार हुने उनीहरुले सोच बनाएका थिए ।
तर एक कर्मचारीको सतर्कताका कारण उनको योजना विफल भयो । जब उनले ट्र्याक छुट्टीएको देखे तब उनले रेलको चालकलाई पहिले नै सावधान गरिदिए र पुलिसलाई पनि बोलाए । जर्ज र उनका साथीहरु एल्क पहाडको र्याटलस्नेक क्यानियनमा गएर लुके । दुई पुलिस अधिकारीले उनीहरुलाई प’क्राउ गर्न जाँदा दुबैको गो ली हा नी ह त्या गरिदिए ।
यूनियन प्यासिफिक रेलरोडले जर्ज प्यारोटमाथि १० हजार डलरको इनाम राख्यो, जुन त्यो जमानामा निकै मोटो रकम थियो । पछि त्यसलाई बढाएर २० हजार डलर बनाइयो । जर्ज र उनका साथीलाई दुई वर्षसम्म प’क्राउ गर्न सकिएन । एक दिन जर्ज मिनोटाको माइल्स सिटिस्थित एक बारमा र क्सी पिइरहेका थिए । त्यहाँ उनी आफ्नो अ पराधबारे निकै बढाई चढाई कुराकानी गरिरहेका थिए । मानिसहरुले पुलिसलाई खबर दिए र उनलाई प’क्राउ गरियो।
बिग नोज जर्जमाथि मुद्दा दर्ता भयो र उनलाई मृ त्युद ण्डको सजायँ तोकियो । उनको जे’लमा हालियो । तर मृ त्युद ण्ड दिनु १० दिन पहिले सन् १८८१ मार्च २२ तारिखमा उनले भाग्ने कोसिस गरे । जर्जले जेलरलाई घा’इते बनाइदिए । घाइते जेलरले आफ्नी श्रीमतीलाई बोलाए । उनी त्यहाँ सर्भिस रिभल्भर लिएर पुगिन् र पुनः उनलाई जेलमा बन्द गर्न सफल भइन् ।
जब सर्वसाधारणलाई उक्त खबर थाहा भयो, तब धेरै मानिसहरु जेल पुगे । उनीहरुले जर्जलाई बाहिर निकाले र ह त्या गरिदिए । जर्जको मृ त शरिर लिन उनका कोही पनि आफन्त नआएपछि डाक्टर थोमस म्याघी र जोन ड्युजीन ओसबोर्नले उनको श व लिए । उनीहरुले जर्जको दिमागको पनि अ नुसन्धान गरे तर त्यसमा केही भिन्न कुरा देखेनन् ।
त्यसपछि ओसबोर्नले जर्जको शरिरबाट जाँघ र छातीको छाला निकाले र त्यसलाई डेनवरस्थित टेनरी (छाला प्रशोधन कारखाना) पठाइदिए । उनीहरुले त्यसको जुत्ता बनाउन आग्रह गरे । छालाबाट मेडिसिन ब्याग पनि बनाइएको थियो । ओसबोर्न उक्त जुत्ता लगाउँथे पनि । उनी पछि व्योमिंगका गर्भनर पनि बने । उनले शपथ ग्रहणका दिन त्यही जुत्ता लगाएको पनि भन्ने गरिन्छ ।
उनले जर्जको खोपडीको माथिल्लो हिस्सा निकालेर आफ्ना १५ वर्षका सहयोगी लिलियन हिथलाई दिए । लिलियन पछि व्योमिंग राज्यकी पहिलो महिला डाक्टर बनिन् । उनी खोपडीलाई एश ट्रेको रुपमा प्रयोग गर्दथिन् । ओसबोर्नले जर्जको शरिरलाई एक ह्विस्की ब्यारलमा राखेर त्यसमा नुन घोलेर भरिदिए । त्यसपछि उनले एक वर्षसम्म विभिन्न प्रकारको प्रयोग गरिरहे । अन्त्यमा त्यो ब्यारललाई डा. मेघीको अफिस पछाडि गाडियो ।
कम्मरमुनीको भागमा दुखेर अस्पताल पुगेकी युवतीको गो प्य अं गमा ७ इन्च लामो बोतल देखेपछि चिकित्सक नै चकित ! पेट दुखेर अस्पताल आएकी एक युवतीको गो प्य अं गमा एक बोतल फेला परेपछि चिकित्सक नै चकित परेका छन् । हिडडुलमा समस्या भएपछि अस्पताल आएकी उनले सामान्य अवस्थामै कम्मरमुनीको भागमा दुखेको बताएकी थिइन् ।
चिकित्सकले बिरामीको तत्काल नै एक्सरे गर्न लगाए । एक्सरे हेर्दा चिकित्सक नै आश्चर्यमा पर्नेगरी बोतल फेला पर्यो । ७ इन्च लामो बोतलका कारण उनी अस्पताल आएको तथ्य सार्वजनिक भयो । चिकित्सकहरुले युवतीको श ल्यक्रिया गरेर गो प्य अं गबाट बोतल निकाले । त्यसपछि बिरामी नर्मल अवस्थामा पुगिन् ।
खास कसरी उक्त बोतल युवतीको गो प्य अं गमा पुग्यो भन्ने प्रश्नमा युवतीले भनिन्, एकदिन आफ्नो गो प्य अंग चि’लाएकाले बोतलले चिलाइ मा रिरहेकी थिइन् । त्यसै क्रममा बोतल गो प्य अं गमा पुगेको थियो । तर अरुले के भन्छन् भन्ने डरका कारण युवतीले यो कुरा परिवारका सदस्यलाई लुकाएकी थिइन् । डेलिमेलका अनुसार युवतीको गो प्य अं गमा पुगेको बोतल लामखुट्टे मा र्न प्रयोग गरिने औषधिको थियो ।
यो पनि ! यौ नसम्बन्धी केहि यस्ता विचित्रका रोचक तथ्यहरु.. विश्वभरका हामीले अनेक यौ नका बिषयमा विभिन्न कुराहरु सुन्दै आएका छौ। हरेक किस्साहरु रोचक तथ्य र आश्चर्य लाग्दो पनि हुन्छ । त्यस्तै, केहि तथ्यहरु बारे बताउदै छौ । एउटा मानिसले ३० मिनेटसम्म सक्रिय यौ नक्रिया गर्दा उसको शरीरबाट करिब २०० क्यालोरी उर्जा खर्च हुन्छ ।
एक मिनेटको चु’म्बनले २६ क्यालोरी खर्च गर्छ । सन् २००८ मा औसत अमेरिकी पुरुषहरुको शु’क्रकीटको संख्या सन् १९७८ को तुलनामा ३० प्रतिशत घ’टेको पाइएको थियो । अमेरिकीहरुले आफ्ना सुत्ने कोठापछि सबैभन्दा बढी यौ नक्रिया गर्ने ठाउँ कार रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । अमेरिकामा प्रत्येक ५ जनामा १ जना कामकाजी मानिसले आफ्ना सहकर्मीसँग यौ नस’म्बन्ध कायम गरेको हुन्छ ।
यौ न क्षमता कमजोर हुनेहरुका लागि औषधीको रुपमा सन् १९९८ मा भि’याग्राको चक्की बजारमा आएको थियो । त्यसबेला उक्त चक्कीको यति बढी माग भएको थियो कि बजारमा आएको तीन महिनाको छोटो अवधिमा मात्रै उक्त औषधी कम्पनीले ४१ करोड १० लाख अमेरिकी डलर नाफा गरेको थियो । वी र्यको मुख्य भूमिका भनेको सन्तानोत्पत्तिमा हुने गर्छ । तर विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने वी’र्यमा हुने प्रोटिनमा छालाको चाउरी हटाउने वा कम गर्ने तत्व पनि हुने गर्छ ।
मानिसमा बच्चा जन्माउनको लागि शु’क्रकीट र अ’ण्डाको जरुरत पर्दछ । एउटा वयस्क पुरुषको शरीरमा दैनिक करोडौं शु क्रकीटहरु उत्पादन भइरहेको हुन्छ । तर एउटा महिलामा भने एउटा निश्चित संख्यामा मात्र अण्डाहरु हुने गर्छ । एउटा छोरी जन्मेको बेलामा उनको शरीरमा करीब १० लाख अ’ण्डाहरु हुन्छन् । तर वयस्क उमेरमा आइपुग्दा त्यो घ’टेर तीन लाख मात्रै हुन्छ । तीमध्ये पनि महिलाको प्रजनन कालमा ३०० देखि ४०० वटासम्म अण्डाहरु मात्रै ग’र्भाधानको लागि निष्काशन हुने गर्छ ।